Dowladda UK oo xayiraad saartay dalal hor leh | Allbalcad Online
Home WARARKA Dowladda UK oo xayiraad saartay dalal hor leh
Dowladda UK oo xayiraad saartay dalal hor leh
Dowladda Ingiriiska ayaa afar waddan oo kale ku dartay xayiraada Karoonaha kuwaasoo oo kala ah Bangladesh, Kenya, Pakistan iyo Filibiin – liiskeeda xayiraadda socdaalka iyadoo ay jirto walaac laga qabo noocyo cusub oo ka mid ah cudurka coronavirus.
Waaxda gaadiidka ayaa sheegtay in xayiraadihii ugu dambeeyay ay ka dhaqan galayaan England laga bilaabo 9-ka Abriil.
Iyadoo la raacayo shuruudaha xayiraadaha safarka, booqdayaasha caalamiga ah ee ka dhoofay ama soo maray waddammada 10-kii maalmood ee ka horreeyay ayaa loo diidi doonaa inay galaan Ingiriiska.
Muwaadiniinta Ingiriiska iyo Irish, iyo kuwa leh xuquuqda deganaanshaha UK, way soo geli karaan laakiin waa inay karantiil ku noqdaan hudheel ay dowladdu oggolaatay muddo 10 maalmood ah, iyaga oo iska bixinaya kharashkooda.
Marka afarta dal lagu daro, waxaa jiri doona wadar ahaan 39 dal oo ku jira waxa loogu yeero “liiska casaanka” ee dowladda. Kuwaas oo ay ka mid yihiin Brazil iyo Koonfur Afrika, halkaas oo lagu aqoonsaday laba nooc oo fayraska ka mid ah.
Previous articleTaliska Ciidanka booliska oo soo bandhigay walxaha qarxa & Ragii diyaarinaayay qaraxyada
Next articleDowladda Soomaaliya oo furtay bixinta Baasaboorrada oo muddo xayirnaa